Aza manome tsiny ny WordPress | Martech Zone
Mpijirika 90,000 manandrana miditra amin'ny fametrahana WordPress anao izao. Statistika mahatsikaiky izany fa manondro ny lazan'ny rafi-pitantanana atiny malaza indrindra manerantany. Na dia agnostika aza izahay momba ny rafitra fitantanana atiny, dia manaja lalina ny WordPress izahay ary manohana ny ankamaroan'ny fametrahana ny mpanjifanay amin'izany.
Tsy voatery hitovy hevitra amin'ny mpanorina ny WordPress izay mamily ny sain'ny maro amin'ny olan'ny fiarovana amin'ny CMS. Na dia afaka manova ny fidirana amin'ny fitantanana admin avy amin'ny admin aza ny olona, ​​ny tombony lehibe indrindra amin'ny WordPress dia ny fametrahana 1-click. Raha tianao hanova ny fidirana izy ireo dia tsindry mihoatra ny 1 izany!
Ho fanampin'izay, tsy tiako ny zava-misy fa ny efijery fidirana dia lalana misy kaoditra sarotra tsy azo ovaina. Mino aho fa ho tsotra ho an'ny WordPress ny mamela lalana manokana.
Izany dia nilaza fa ny masoivoho rehetra manangana sy manohana tranokala WordPress dia mitazona ny ankamaroan'ny andraikitra eo am-pelatanany. Manome ny mpanjifanay rehetra izahay Flywheel satria manao asa mahatalanjona toy izany izy ireo amin'ny fanaraha-maso ny filaminana sy ny fiantohana ny teny miafina matanjaka kokoa. Ary koa, Flywheel mitaky anao hampiasa fidirana hafa noho Admin rehefa mamorona ohatra WordPress miaraka amin'izy ireo ianao.
Manana mpanjifa hafa izahay izay nanana olana goavana amin'ny WordPress… hadisoana, olana momba ny fahombiazana ary fitantanana sarotra. Ireo rehetra ireo dia tsy olan'ny WordPress, na izany aza. ry zareo Olana mpamorona WordPress. Ny iray amin'ireo mpanjifanay dia sehatry ny tolo-kevitra momba ny varotra - ary manana atiny namboarina manokana izy ireo manerana ny tranonkalany. Namboarina tamin'ny maso ivoho iray hafa, ny fitantanana ny pejin'izy ireo dia tsotra amin'ny alàlan'ny sehatr'asa mahazatra mandroso:
mampiasa Sehatra manokana mandroso, hery misintona Forms ary fivoarana lohahevitra tsara, Highbridge dia afaka nanangana tranokala mpiasa iray manontolo ho an'ny mpanjifa. Miasa tsy misy kilema ary nilaza ny mpiasan'izy ireo fa nofinofy ny fitondrana.
Ny tranokalanao WordPress sy ny fiarovana ny WordPress anao dia tsara indrindra toa ireo fotodrafitrasa natsangany ary tsara toy ny fampiroboroboana ny lohahevitra sy plugins nampidirinao. Aza omena tsiny ny WordPress… mitadiava mpamorona vaovao sy toerana vaovao hampiantranoana azy!
Tags: acfsaha manokana mandrosolohahevitra WordPress manokanaflywheelendrika misintonampiara-miasa amin'ny fahombiazanampiara-miasa tampon'nytinderboxfampivoarana ny wordpressvoafitaka ny wordpressWordPress hostingfiarovana WordPresswpengine
Manomboka amin'ny CXM ny fahombiazana an-tserasera
May 3, 2013 amin'ny 9: 00 AM
Tsy afaka miverina any amin'ny mpamokatra ny lampihazo foana izahay ary miteny hoe "Anao no nahatonga izao."
Manaiky aho fa misy lavaka fiarovana izay tsy mbola noresahin'i WP, ary tiako ny fametrahana 1 click. Na izany aza, tiako kokoa ny tranokala azo antoka, ka hanao izany dingana fanampiny izany aho. Ny fahadisoako dia na dia namorona kaonty admin uber vaovao misy solonanarana vaovao aza aho dia tsy nofafako ilay kaonty admin taloha. Nahafahan'ny mpijirika ny tranokalako izany.
Lasa mora ny mijery ireo zavatra ireo satria matoky ny mpanamboatra ny sehatra izahay, saingy andraikitsika ny ho mpiandry vavahadin'ny tranokalantsika. Mila manamafy orina ny fanjakana isika.
May 6, 2013 amin'ny 3: 43 AM
“Ankoatra izany, tsy tiako ny hoe ny efijery fidirana dia lalana misy kaody sarotra izay tsy azo ovaina. Mino aho fa tena tsotra ho an'ny WordPress ny mamela lalana mahazatra. ” Tsy afaka miombon-kevitra aminao bebe kokoa aho. Ny zava-misy fa ny efijery fidirana dia lalana sarotra - ny / wp-admin - ary tsy azonao ovaina izany, raha ny hevitro, dia manamaivana ny asan'ny hackers izay manandrana miditra ao amin'ny blôginao. Misaotra anao nanoratra ity lahatsoratra ity, misy zavatra maro izay ekeko fatratra ry Douglas.
May 8, 2013 ao amin'ny 7: 43 PM
Misy plugin mamela anao hanova ny admin sy ny lalana fidirana:
May 8, 2013 ao amin'ny 7: 44 PM
Hitako ihany koa ireo plugins, saingy mila endri-javatra fototra izay ao anatin'ny fanamafisana WordPress izany.
Jun 16, 2013 ao amin'ny 4: 49 PM
"… ny tombony lehibe indrindra amin'ny WordPress dia ny fametrahana 1-tsindrio foana". Tsy tena tianao izany, sa tsy izany? MIEKE TANTERAKA amin'ny ambiny amin'ny lahatsoratra aho, na izany aza, ary manaiky indrindra fa miankina aminay amin'ny maha masoivoho, orinasa fampiantranoana ary mpamorona ny hanao asa tsara kokoa amin'ny fiarovana ny CMS (maimaim-poana) izay nahatonga anay rehetra vola be tao anatin'ny 10 farany. taona.
Jun 16, 2013 ao amin'ny 10: 26 PM
Ny fametrahana 1-click sy ny fitohizan'ny fikojakojana no tena nanapoaka ny fitomboan'ny WordPress. Tsy milaza aho fa izay ihany no tombony – misy an-jatony hafa. Saingy misy rafitra CMS maimaim-poana maro hafa any izay tsy ampy ny fametrahana tsotra nataon'ny WordPress… rehefa tsy afaka nanamboatra azy ireo ny olona dia nariany.
Jun 16, 2013 ao amin'ny 11: 31 PM
Azoko izay lazainao, fa ny 1-click dia tsy endri-javatra WordPress, fa ny fampiantranoana kaonty fampiantranoana.WP dia malaza amin'ny fametrahana 5 minitra, fa tsy ny fametrahana 1-click. Fametrahana 5 minitra ahafahanao misafidy solon'anarana hatramin'ny dikan-teny 3.0. Afaka manova mora foana ny script WP 1-click Install ny mpampiantrano mba hahatonga ny mpampiasa mpampiasa ho azo antoka kokoa.
Nipoaka ny WP satria ny vondrom-piarahamonina manohana azy dia nahatratra faobe, zavatra tsy vitan'ny CMS hafa. Ny fanamorana ny fametrahana sy ny fikojakojana mitohy dia tena nitana anjara toerana lehibe tamin'izany, saingy misy lafin-javatra maromaro izay nisy fiantraikany lehibe lavitra noho izany (ohatra ny fahatongavan'ireo karazana lahatsoratra manokana).
Ny teboka iray hafa tokony hatao dia ny hoe tsy misy mpijirika 90,000 any no manandrana miditra amin'ny fametrahana WP fantatra. Somary diso hevitra izany. Adiresy IP 90,000 dia tsy mitovy amin'ny mpijirika 90,000, izay mety hanimba mora kokoa noho ny botnet.
Amin'ny ankapobeny dia ekeko ny voalazanao. Tsy maintsy manao dingana hiantohana ny WP isika raha hanolotra izany ho vahaolana ho an'ny mpanjifantsika. Ny fahazoana ny WP Install anao voajirika sy manome tsiny azy amin'ny vokatra fototra dia toy ny fahazoana virus amin'ny PC-nao ary manome tsiny azy amin'ny tsy fahampian'ny fiarovana an'i Microsoft. Mila mitandrina isika raha tsy izany dia hiafara amin'ny safidy fiarovana izay tsy tiantsika ampiana amin'ny vokatra fototra.
25 Jiona 2013 à 9:34
tena nampahafantatra izany – tsy toy ny ankamaroan'ny zavatra hitako an-tserasera. mizara 🙂